Amanzi amancinci okuvula amanzi esinyithi abavelisi kunye nababoneleli - China Ifektri encinci yokuvula amanzi
Indawo yokuGcina amanzi eKhampini
Imveliso ekufuneka ibenayo kwimidlalo yangaphandle. Thathela ingqalelo imisebenzi yokusebenza, ukuthwala kunye nokukhuselwa kwendalo. Dibana neemfuno zokuphindaphindwa kwamanzi. Izinto zokutya ezinobungakanani bendalo, zive ukhululekile ukuzisebenzisa. Kufanelekile ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisikile, ukubaleka kunye neminye imidlalo emininzi yangaphandle.
Ingxowa yaManzi yangaphandle ilungele uMgangatho oPhezulu
Iya kuba ngumncedisi wakho ophambili ngaphandle, iyaphatheka, ayinxibi, iyomelela, ayiyityhefu, kwaye ayinavumba. Izinto ezikumgangatho wokutya zikulethela olona luvo lubalaseleyo. Ingadlala indima ebalaseleyo ngaphandle. Vumela ukugxila ekusebenzeni, ukunqumla ilizwe, okanye ukunyuka intaba.
Ikampu yokuHamba ngebhayisikile yokuGcinwa kwaManzi
Le yibhegi yamanzi entle evulekileyo. Ubume bendalo ngaphandle kwezinto zeBPA. Eli chibi litsha kunye nefashoni eliluhlaza lwenza ukuba ungoyena mntu ukhazimlayo kwezemidlalo. Sinokukubonelela ngeenkonzo ezenzelwe wena ezinje ngezixhobo zemveliso, izimbo, imibala kunye neelogo. Yiba ngumngcamli wakho wezemidlalo ngaphandle.
Imidlalo yangaphandle yoLwelo lwesinye
Umlingane obalaseleyo kwimidlalo yangaphandle. Iyaphatheka, ayinxibi, yomelele kwaye iyasebenza. Izinto ezikumgangatho ophezulu ezikulungeleyo ukusingqongileyo zikuvumela ukuba usondele kwindalo ngelixa uyikhusela. Idlala indima ebalulekileyo kwimidlalo yangaphandle enje ngebhayisikile, ukunyuka intaba, ukubaleka, kunye nelizwe elinqamlezileyo. Vumela ukudlala okupheleleyo kumandla akho ngaphandle kokukhathazeka.
TPU / EVA / PEVA Reservoir Hydration yangaphandle yeMidlalo
Ukusebenza okuphezulu kwebhegi yamanzi yezemidlalo. Ububanzi enkulu port ziphene amanzi, kulula ukuyisebenzisa. Izinto ezikhuselekileyo nezingenancasa, zikunika elona thuba lihle. I-snap-on suction nozzle ivala ngokuzenzekelayo xa ingasetyenziswa. Ityhubhu yokutsala inokulungiswa kubhaka we-hydration, ekulungeleyo ukuzalisa amanzi ngexesha lokuzilolonga.